त्रिपाल ओढाएर राखेको रेल चल्ने मिति फेरि धकेलियो| Corporate Nepal
त्रिपाल ओढाएर राखेको रेल चल्ने मिति फेरि धकेलियो
असार २४, २०७८ बिहिबार १७:५९
काठमाडौं । भारतबाट बनाएर ल्याएको रेल नेपाल आएको १० महिना भइसके पनि फेरि सञ्चालन गर्ने मिति भने फेरि पर धकेलिएको छ । भारतले निर्माण गरेका संरचना हस्तान्तरणमा ढिलाई हुँदा र जनशक्ति तयार नहुँदा रेल सञ्चालन गर्ने मिति पर धकेल्नुपरेको जनाइएको छ ।
भारतको कोंकण रेलवे कर्पोरेसन लिमिटेडले ८४ करोड ६५ लाख रुपियाँ लागतमा निर्माण गरिदिएको रेलको सेट अलपत्र भएपछि सरकारको आलोचना हँदै आएको छ । यसअघि असारभित्रै रेल सञ्चालन गर्ने भनिए पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सबै संरचना प्राप्त नभइसकेकोले असारभित्र रेल सञ्चालन गर्न नसकिने तर्क गरेको छ ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरुले असारमै रेल सञ्चालन गर्न प्रयास गरिए पनि सबै पूर्णधार तथा जनशक्ति तयार हुन नसकेकोले केही समय अझै मिति धकेल्नुपरेको बताएका छन् । यसअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त नेम्वाङले असारबाटै रेल चलाउन निर्देशन दिएका थिए । भारतबाट रेल आएको १० महिना भइसकेको छ । रेल सञ्चालन गर्न सरकारले निर्माण गरेको रेलवे कम्पनीले विभिन्न कारण देखाउँदै सञ्चालन मिति पर सार्दै आएको छ ।
कम्पनीले रेल आएपछि रेल चलाउने जनशक्ति नै आफूसँग नरहेको बताउँदै आएको थियो । साथै रेल सञ्चालन गर्न नीतिगत र प्राविधिक पक्षमा समस्या औंल्याउँदै कम्पनीले त्यसलाई सहज गरिदिन मन्त्रालयलाई आग्रह गर्दै आएको थियो । सरकारले अध्यादेशबाटै त्यससम्वन्धी ऐन जारी गरिसकेको छ । मन्त्री नेम्वाङले त्यस्ता समस्या समाधान भइसकेको र कोरोना महामारी पनि कमी हुँदै गएकाले असार लगत्तै रेल सञ्चालन हुने बताएका थिए ।
जयनगर–कुर्था ३५ किलोमिटर खण्डमा सञ्चालन गर्ने भनेर ल्याइएको रेल त्रिपाल ओढाएर राखिएपछि रेलको लिकका सामानहरू चोरी हुने, उपकरणहरू बिग्रिने जस्ता समस्या आउने गरेका छन् । अहिले कोंकणकै प्राविधिकले थन्किएका रेलको जाँच गर्दै आएका छन् ।
अर्थमन्त्रीले देशको सम्पत्ति मूल्यांकन गराउने, ‘गरिवलाई पैसा दिने निर्णय गर्दा आलोचना गरियो’
साउन २७, २०७८ बुधबार
अब २० युनिट विद्युत खपत गर्नेले पैसा तिर्नुनपर्ने, प्रतियुनिट महशुल रु. ११ भन्दा कम गर्ने निर्णय
साउन २६, २०७८ मंगलबार
साझा कार्यक्रम र स्वेतपत्रले मौद्रिक नीतिमाथि दबाब सिर्जना, छिटो नल्याए जटिलता आउने
साउन २५, २०७८ सोमबार
सरकारी कर्मचारीको बढेको तलबमान मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत
साउन २४, २०७८ आइतबार
साझा कार्यक्रमः कोभिड प्रभावितलाई राहतदेखि स्वास्थ्य सामग्री खरिदको अनियमितता छानविनसम्म
‘कृषि भूमि चार करोड टुक्रा भइसक्यो, कसरी कृषिको विकास हुन्छ ? व्यक्तिगत स्वामित्व अन्त्य गरौं’